Vaovao - Fanangonana sy fitaterana entona entona entona
Fanangonana sy fitaterana entona entona solika
Ny fanangonana entona entona entona (izany hoe entona mifandray amin'ny solika) sy ny rafi-pitaterana amin'ny ankapobeny dia ahitana: fanangonana entona, fanodinana entona; Fitaterana entona maina sy hydrocarbon maivana; Fitaterana voaisy tombo-kase ny menaka maloto, fahamarinan-toeran'ny menaka maloto, fitehirizana ny hydrocarbon maivana, sns.
Fanangonana entona entona entona
Aorian'ny fivoahan'ny menaka maloto avy amin'ny fantsakana solika ary refesina amin'ny alàlan'ny separator metatra, ny solika sy ny entona dia entina ao amin'ny separator solika sy entona ao amin'ny tobin-tsolika. Ny entona entona entona dia misaraka amin'ny solika ary miditra ao amin'ny tambajotra fanangonana entona. Amin'ny ankapobeny, ny tobim-pamokarana entona fanerena-tena na booster dia aorina ao amin'ny toby famokarana solika. Ny compressor booster dia compressor reciprocating dingana tokana maromaro maromaro. Ny tsindrin'ny fidirana dia afaka mitsingevana, ary ny fanerena mivoaka dia miankina amin'ny fanerena miverina amin'ny rafitra. Ny fanerena avo indrindra dia 0.4MPa.
Fanangonana mihidy sy fitaterana ny menaka maloto
Ny fanangonana mihidy sy ny fitaterana ny menaka maloto no fepetra voalohany amin'ny fitrandrahana hydrocarbon maivana amin'ny solika amin'ny alàlan'ny fomba fanamafisana ny solika, ary iray amin'ireo fepetra manan-danja ihany koa hampihenana ny fahaverezan'ny solika.
Ao amin'ny toeram-pivarotan-tsolika, ny menaka maloto mandalo amin'ny separator entona-menaka dia miditra ao amin'ny mpanala rano maimaim-poana, ary avy eo dia alefa any amin'ny tobim-pamokarana menaka tsy misy rano amin'ny alàlan'ny tanky buffer mitondra rano sy ny lafaoro fanafanana fanondranana. Eto, ny menaka maloto dia mandalo amin'ny fanesorana rano maimaim-poana, avy eo dia miditra ao amin'ny lafaoro fanamainana ny tsy fahampian-drano ho an'ny fanafanana, ary avy eo dia miditra amin'ny dehydrator elektrika mitambatra. Aorian'ny tsy fahampian-drano dia miditra ao amin'ny tank buffer ny menaka maloto (latsaky ny 0,5%) ny rano ao amin'ny menaka fanosotra, ary avy eo dia arotsaka ao amin'ny vondrona fanamafisana ny solika, ary aorian'ny fanamafisana dia miditra ao amin'ny tanky fitehirizana ny menaka fanondranana.
Amin'ny dingana mihidy amin'ny tobim-pitaterana solika sy tobim-pamokarana rano, dia avoaka mialoha ny rano maimaim-poana ary afangaro amin'ny rano tsindrona solika eo an-toerana mba hampihenana ny fandaniana angovo amin'ny famokarana.
Fanodinana ny entona entona solika
Ny entona entona avy amin'ny tobin'ny fanerena tena dia miditra ao amin'ny tarika mangatsiaka mangatsiaka (na cryogenic), izay misy fanerena, mangatsiaka ary misaraka miaraka amin'ny entona tsy misy condensable avy amin'ny tobin'ny fanamafisana ny solika mba hamerenana ireo singa eo ambonin'ny C3 (na C2). , ary aondrana ny entona maina.
Fanangonana hydrocarbon maivana sy rafitra fitaterana
Ny fanangonana sy ny fitaterana hydrocarbon maivana dia mampiasa fomba fitaterana pipeline, ary ny rafitra dia ahitana fitahirizana fanampiny, tobim-pitaterana, fitehirizana ankapobeny, toby fanondranana fanondranana ary tambajotra sodina mifandraika amin'izany.
ny sampana fanarenana hydrocarbon maivanadia fitaovana amin'ny fitoeran-javatra fitahirizana, izay ampiasaina amin'ny fametrahana ny tsy fahampian-drano, ny vokatra fampihavanana, buffer ny fanondranana paompy sy fanondranana fantsona mba hiantohana ny famokarana ara-dalàna na nomanina fanakatonana ny vondrona raha sendra loza. Ny fahafaha-mitahiry ny tanky fitehirizana dia matetika 1 hatramin'ny 2 andro amin'ny famokarana hydrocarbon maivana.
Ny tena anjara asan'ny hazavana hydrocarbon transfer depot dia ny fampiasana ny depot mba handrindra ny tsy fifandanjana eo amin'ny famokarana hydrocarbon maivana sy ny fanondranana ao anatin'ny iray andro, ary ny fitahirizana sy ny fanadiovana ny fantsona effusion raha sendra loza ny fantsona.
Ny asa lehibe indrindra amin'ny fitehirizana hydrocarbon maivana amin'ny ankapobeny dia ny fampiasana ny tanky fitehirizana mba handrindrana ny tsy fifandanjana eo amin'ny famokarana sy ny fanondranana hydrocarbon maivana, ao anatin'izany ny fiovaovan'ny vokatra avy amin'ny vondrona famokarana, ny fiovaovan'ny vokatra vokatry ny vanim-potoana fikojakojana samihafa ao amin'ny vondrona, ny orinasa ethylene. ny fikojakojana tsy misy fikojakojana amoniaka, ary ny sehatry ny solika dia mila manohy manome ny fitehirizana ny hydrocarbon maivana azo avy amin'ny entona fahana.
Ny fitehirizana ankapoben'ny hydrocarbon maivana sy ny tobim-pandrefesana ny fanondranana dia ny fivoahana lehibe amin'ny akora manta hydrocarbon ranon-tsolika omen'ny saha solika ho an'ny orinasa ethylene, ny toerana fanangonana ny hydrocarbon maivana novokarin'ny vondrona fanarenana hydrocarbon maivana isan-karazany, ary ny foiben'ny fitehirizana hydrocarbon maivana sy ny rafitra fitaterana. .
Rafitra fanondranana sy famerenana ny entona maina
Ny entona entona entona solika dia tsaboina sy karakaraina aorian'ny fanarenana. Ny ankamaroan'ny entona maina aorian'ny famerenana ny hydrocarbon maivana dia alefa any amin'ny orinasa Dahua sy methanol ho akora simika, ary ny ampahany amin'ny entona maina dia alefa any amin'ny tobin-tsolika eo amin'ny sehatry ny solika ho solika ho an'ny fanafanana lafaoro sy boiler. Ny fiverenan'ny entona maina dia ny fizotry ny fanangonana entona. Mandritra izany fotoana izany, ny sasany amin'ireo entona maina dia ampidirina ao anaty fitahirizana entona amin'ny fahavaratra. Vita amin'ny ririnina izy io mba hanamaivanana ny tsy fahampian'ny famatsiana sy ny fangatahana entona voajanahary.
Misy amin’ireo entona maina no ampiasaina hamokarana herinaratra sy entona ho an’ny mponina.